Telefoonada Nokia Lumia isticmaali Window mobile 8 OS iyo wareejinta wixii macluumaad ah ee phone in telefoonada Android ma ahan nidaam sahlan. Inta badan macluumaadka muhiim u yihiin xiriirada aan u baahan nahay siyaabo taas oo aan si aannu telefoonka cusub wareejin karaan xiriirada. Beddelidda in phone cusub hab Samsung soo bedelato Windows 8 ilaa Android laakiin xogta user isku mid, taas oo loo baahan yahay in la soo gudbiyo qalab cusub. In this article, aan soo bandhigno laba xal kaa caawinaya in aad ka Lumia wareejiyo xiriirada qalabka Samsung fudud.
1. Xiriirada Transfer la Mobiletrans (kaaftoomi Free)
2. xiriirada nidaameed ee Lumia in aad xisaabta Muuqaalka
3. Waa kuwee telefoonada Samsung waxaa loo isticmaalaa Maraykanka ee?
Xalka 1: Transfer Xiriirada la Mobiletrans (kaaftoomi Free)
In kastoo in xal ugu, wareejinta xiriirada ka phone Windows qalabka android ma fududa, Wondershare Mobiletrans waa geeddi-socod quruxsan fudud ka dhigaa. Mobiletrans Wondershare taageeri karaan in Xiriirada, Videos, Photos, Music files wareejiyo ka phone Windows in Android in mid ka mid click.
Tallaabooyinka lagu Xiriirada ka Lumia wareejiyo Samsung la Mobiletrans
Tallaabada 1. Download iyo rakibi Mobiletrans Wondershare on your computer. Fur Mobiletrans Wondershare, oo waxaad arki doontaa interface ugu muhiimsan sida hoos.
Hubso in aad leedahay Lumia Xiriirada aad gurmad si Onedrive ku saabsan telefoonka. Haddii aan, fadlan la furo Dadka app ee aad taleefan, garaac Settings, ka dibna garaac dar xisaabta ah in raad raac xiriirada si Onedrive.
Tallaabada 3. Mobiletrans, dooran Soo Celinta ka kaabta, dooro Onedrive sameeyaan fursadaha. Markaas saxiixa in xisaabta aad Onedrive
Ka dib markii aad saxiixdo in account Onedrive si guul ah, Wondershare Mobiletrans doono falanqayn aad gurmad file iyo muujiyaan Xiriirada ah.
Connect qalab Samsung in kombiyuutarka via cable USB ah. Ka dib markii la aqoonsado Mobiletrans telefoonka, riix Start Transfer. Markaas Mobiletrans kaa caawin doona inaad wareejiyo dhammaan xiriirada si aad u qalab Samsung.
Xalka 2: xiriirada nidaameed ee Lumia in account Muuqaalka aad
Waxa ugu horreeya ee aad u baahan tahay inaad samayso waa inaad u hagaagsan Lumia in account Muuqaalka aad. Halkan waxaan ka hadleynaa ka Lumia wareejinta xiriirada in Samsung. Ma jiro hab sahlan laakiin waa suuro gal. Habkaan waxaa loo kala qaybiyaa laba qaybood.
Part I: Dhoofinta Lumia xiriirada in aad xisaabta Outlook.
Qaybta II: Keenista xiriirada ka Outlook warsan in aad telefoon Samsung.
Habkan, waxaan isticmaali doonaa software xisbiga saddexaad Wondershare MobileGo. MobileGo iyo qaababka ay lagu qeexay Qaybta II.
Shuruudaha: isku xirnaanta Internet-ka iyo xisaabta saadaasha aqoonsiga.
1. Kaadhkaaga screen guriga liiska codsiga iyo raadinta Settings. Tubada iyo galaan si Settings.
2. Haddaba tag in email + xisaabaadka.
3. Sida aad rabto in aad ku darto account cusub, kaliya ka jaftaa on "ku dar xisaabta ah".
4. Next screen ku tusi doonaa fursadaha account email kala duwan oo lagu dari karaa si aad telefoon. Dooro Outlook.
5. Ka hor inta, waxay maraysaa talaabadan u hubiso in aad ku leedahay xisaabta Muuqaalka sameeyo. Si fudud Waxaad ka heli kartaa mid ka mid ah ay u helaan software aragti ka PC iyo in la abuuro hal. Tani waa lagama maarmaan, maxaa yeelay, in talaabadan aad isticmaalayso isla aqoonsiga. Just dari cinwaanka email iyo password loo isticmaalo si aad u Muuqaalka iyo garaac Saxeex.
Marka aad saxiixay, xiriirada aad la si toos ah synced doonaa account Muuqaalka ah. Waxaad heli kartaa xiriirada aragti ka qalab kasta oo la isku xirnaanta internet.
Qaybta II: Keenista xiriirada ka account Muuqaalka in aad telefoon Samsung
Sidaas, sida aad u dajiyaan karaa xiriir ka Outlook si fudud lagu xisaabiyo? Software sida Wondershare MobileGo ka dhigaysa nidaamka oo dhan wax badan ka sahlan. Halkii ay ka shaqeeya si ay u gudbiyaan xiriirada ka Lumia in Samsung saacado, oo dhan waxay ku qaadan kartaa waa dhowr daqiiqo ah inay sidaa sameeyaan. Waa sahlan oo quruxsan. Wondershare Caawisaa qalabayn nidaamka oo dhan. Waa kuwan sida ay u shaqayso.
Habka ugu fiican ee soo dhoofsadaan xiriirada si aad Samsung waa adigoo isticmaalaya software xisbiga saddexaad Wondershare MobileGo. MobileGo waa xal stop keliya ee maamulaya baahan telefoonka. Software Tani waxay taageertaa macruufka, Windows, iyo Android. Halkan waxa ku jira muuqaalada MobileGo ah:
Waxa aad maamuli kartaa warbaahinta ka badan qalabka kala duwan. Isticmaalka qaababka ay warbaahinta u awood badan maaraynta, waxaa sahlan inaad kala soo baxdo, dhoofinta, iyo dajiyaan music aad, sawiro, iyo videos ku qasabno yar oo fudud.
Its qaababka lagama tayadoodii iyo noqonin qalab si sahlan aad. Waxaad nuqul karo xogta, qalabka biiro, maareeyaan barnaamijyadooda, gurmad, soo celinta, iyo qaar badan oo.
Waxa uu hormartay muuqaalada u ogolaanaysa in aad ka bogsato xogta la tirtiro ama guuldarro ka ugu tayada sareeya. Waxaad heli kartaa nidaamka kharshyada hawlgalka ee aad telefoonka, kaas oo la kordhiyo shaqeynta qalabka.
Software lagala soo bixi karaa goobta wondershare. Waxay leedahay version maxkamad lacag la'aan ah iyo qaddar version buuxa. Waxaad kala soo bixi kartaa Mac ama Windows version sida aad u baahan tahay.
Halkan waxa ku jira tallaabooyin si ay u gudbiyaan xiriirada ka Outlook in aad Samsung.
Shuruudaha: computer la isku xirnaanta internet, account saadaasha aqoonsiga, cable qalab Samsung USB.
Step1. Download MobileGo ah oo ku xidh on your computer. Connect aad Samsung via USB. Marka aad computer ogaadaa qalabka, kaliya abuurtaan codsiga. Your telefoonka lagu baari doono software ah oo ku tusi doonaa xaaladda telefoonka.
Tallaabada 2. Laga guddi bidix si Xiriirada tagaan. Markaas guji Import, kuwaas oo furi menu la dhawr fursadood oo soo dejinta. Just guji ka Outlook Express ama ka Outlook / 2003/2007/2010/2013.
Tallaabada 3. Hadda waxaad haysataa in ay doortaan account xiriir ah si loo badbaadiyo xiriirada laga keeno. Marka aad u doortaan barnaamijka ay bilaabi doonaan degsado xiriirada si aad android.
Marka download dhamaato, waxaad arki kartaa in xiriir daray ayaa u muuqday in account xiriirada aad telefoon. Iyada oo habkan loo hubiyo in aad isticmaasho computer ka mid ah in uu leeyahay Outlook la mid ah shahaadada aqoonsiga aad isticmaali aad Lumia si hagaagsan xiriir ah.
Samsung waxaa ku kalsoon tahay saaraha casriga ah adduunka oo dhan. In USA ka dib markii Apple, Samsung waa brand casriga ah ee ugu caansan. Samsung ayaa haatan dhowr telefoonada ee suuqa. Laga soo bilaabo dhamaadka sare si ay telefoonada miisaaniyadda, kala duwan oo kasta waxaa daboola Samsung ah. Halkan waxa ku jira 10 aaladaha Samsung ugu sareysa ee hadda loo isticmaalo in USA:
The Galaxy Note 6 iyo Fiiro 6 Edge tusaale ahaan waxaa lagu qiyaasay in ay soo gudbaan mark 70 m iibka sanadkan. Haddii taasi waa sidaas, waxa laga yaabaa in sanadka ah ee Samsung, la Samsung xitaa ay awoodaan in ay ku garaacday horjeeda Apple. Kor ku xusan telefoonada waa telefoonada sare Samsung hadda la heli karo Mareykanka ee. In kastoo Badankoodna waa telefoonada dhamaadka sare, dhexdhexaad cows iyo telefoonada hoos u jaban, ayaa sidoo kale wax badan ka fiican in casriga kale. Taasi waxay kamid tahay dadka isticmaala for design ay, waxqabadka, iyo isku haleen oo caan ah. Haddii aad tixgelinayso inaad Samsung sida aad telefoon cusub, hubi oo kaliya baxay kala duwan ee telefoonada ee ay bixiyaan iyo Eeg liiska ee ugu fiican telefoonada Samsung ee USA.
> Resource > Android > Sidee si ay u gudbiyaan Xiriirada ka Lumia in Samsung